संघीयता र समावेशितामा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट::Independent News Portal from Nepal.
मेला सफल बनाउन सहयोग गर्ने टोल बिकास संस्थाहरुको प्रतिवद्धता
बुटवलमा दुई दिने सञ्चार तथा सुचना प्रविधि सम्बन्धि प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम शुरू
भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने बिषयमा तीनै तहका सरकार बिच एकरुपता देखियोःमानव अधिकारबादी नेता पहाडी
स्थानीय निकायदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचार बढ्यो : मानव अधिकारका अध्यक्ष पहाडी
नेकपाको सचिवालयद्धारा स्थायी कमिटी बैठकको एजेण्डा तय
तिलोत्तमा मेयरकप ब्याडमिण्टनको उपाधि गुरुङ र थापालाई
कालिन्चोकबाट भक्तपुर आउँदै गरेको बस दुर्घटना हुदा मृत्यु हुनेको संख्या१४ पुग्यो
रुपन्देहीको तिलोत्तमामा एक महिलाको हत्या
औद्योगिक व्यापार मेलाको तयारी , ब्यबस्थापन कसरी हुदैछ त ? प्रचारप्रसार समिति संयोजक अधिकारी
हिंसा के हो कस्तो व्यवहारलाई हिसा भनिन्छ अझै पनि मानिसले बुझेको पार्ईएको छैन:उपप्रमुख आचार्य
बाँकेमा विद्यार्थीमाथि गरेको दमनको बिरोधमा बिद्यार्थी संघ रुपन्देहीद्धारा बुटवलमा विरोध
बच्चाहरुलाइ जाडो मौसममा अरु बेलामा भन्दा बढी स्याहार गर्नु पर्छ:बाल रोग बिषेशज्ञ डा.पन्थी
तिलोत्तमालाई बालमैत्री नगरपालिका बनाउने सरोकारवालाहरुको प्रतिबद्धता
डाक्टरको लापरवाहीले बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा धर्ना
प्राविधिक शिक्षाको विकल्प नभएको यसलाई अगाडी बढाउन प्रदेश सरकार लागिपरेको छ :मन्त्री बराल
नारायणगढ-मुग्लिन सडक शुक्रबारदेखि ४ घण्टा बन्द हुने
संघीयता र समावेशितामा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट
अतहर कमाल मुसलमान
शनिबार, चैत्र २, २०७५
नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद कुनै ठूलो होइन । महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा विभिन्न पक्षले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई आआफ्नो पक्षमा पार्नका लागि निर्वाचनमा हुन सक्ने फाइदालाई आंकलन गरेर विभिन्न किसिमका प्रयास गरिरहेका छन् । बाहिरबाट हेर्दा यो विवाद देखिएला तर वास्ताविकता भनेको यो प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो र यसलाई विवाद भन्न मिल्दैन । तर पार्टीको आधिकार बैठकमा छलफल हुँदा बाहिर आएको जस्तो विवाद देखिँदैन । तर, पछिल्लो चरणमा विवादजस्तो कुराहरू आएका छन् । महासमिति बैठकपश्चात् केन्द्रीय समितिको बैठकबाट विधान सर्वसम्मतले पारित भइसकेपछि केही विषयहरू विवादित हुन पुगेको हो । त्यसैले यस्ता कुराहरू महाधिवेशनलाई नै मध्यनजर गरेर आएका छन् ।
विवादका लागि विवाद खडा गर्ने मान्छेहरू जहिले पनि खुल्ला हुन्छन् । यस्ता किसिमका विवाद खडा गर्नका लागि कुनै किसिमको नियम कानून अथवा अन्य कुराहरू आवश्यक हुँदैन । कांग्रेसको महासमिति बैठकमा विधानमै सर्वसम्मतिबाट गर्ने विषयहरू छन् । त्यही विषयलाई केन्द्रीय समितिले प्रस्तावको रूपमा लैजान सक्छ । अर्को कुरा महासमिति सदस्यहरूले एक तिहाइले हस्ताक्षर गरेर विधानमै आवश्यक संशोधन हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव दर्ता गरेर दुई तिहाइले प्रस्ताव पारित गर्ने भनिएको छ ।
यहाँनिर के भयो भने महासमिति बैठकभन्दा पहिला पटक–पटक केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो र सहमति हुन नसकेका विषयहरूले बैठक नै प्रभावित हुने अवस्था भएपछि एउटा विषयमा सहमतिमा पुग्यो । सहमति भएर अगाडि बढिसकेको विषयमा पनि कतिपय साथीहरूले हैन यो गलत भयो भनेर नोट अफ डिसेन्ट पनि लेख्नुभएको छ । अहिले आएर नोट आफ डिसेन्ट लेख्ने हो भने यसभन्दा अगाडि किन सर्वसम्मति भनेर लेख्नुभयो । यो प्रश्न उहाँहरूलाई गर्न सकिन्छ । तर त्यसरी पार्टी चल्दैन । त्यसले पार्टीभित्र द्वन्द्वको परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ । उहाँहरूले सभापतिले पेलेर लैजान खोज्यो भन्ने आरोप लगाउनुभएको छ, यो सरासर निराधार हो । हामीले हेर्ने भनेको दस्तावेज र त्यसको विधि प्रक्रिया हो । त्यसैले उहाँहरूले महाधिवेशनमा आफ्नो स्ट्रेन्थ कायम गर्नका लागि यस्ता कुराहरू गर्नुभएको हो ।
कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले विधानको विषयमा छलफल ग¥यो, यसलाई कार्यसमितिमा राखिन्छ, निर्णय गर्ने बेलामा कुनै कुरामा सर्वसहमत पनि हुनसक्छ, कुनै विषय अल्पमत र बहुमत पनि हुनसक्छ । किनभने लोकतान्त्रिक विधि नै यही हो । अल्पमतले सत्ता सञ्चालन गर्न खोजेको भए लोकतान्त्रिक विधिको उपहास हुन्थ्यो । हाम्रो लोकतान्त्रिक परिपार्टी नै के हो भने जोसँग बहुमत छ उसले शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने हो । हामीले संसदीय व्यवस्था, लोकतान्त्रिक विधिलाई मानेका छौं । जुन विषयमा सर्वसम्मत हुन सक्दैन त्यसलाई अनन्तकालसम्म बन्धक बनाएर राख्न पनि त उचित हुँदैन । त्यसैले लोकतान्त्रिक विधिबाट पार्टी चलेको छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक विधिअनुसार नै विधानको सर्वसम्मतबाट प्रस्ताव गएको हो ।
कांग्रेसको विधानमा संशोधन गर्नका लागि दुईटा बाटो मात्रै छ । एउटा केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गरेर विधान संशोधन माथि लैजाने अथवा महासमिति र महाधिवेशनमा एक तिहाइ सदस्यले हस्ताक्षर गरेर त्यसमा दुई तिहाइ पु¥याएर संशोधन गर्न सक्छ । ती दुइटै विधिबाट नआएको विषयलाई कसैले मेरो स्वार्थ र चाहना छ भन्दैमा हुँदैन । किनभने नेपाली कांग्रेस त सबैको पार्टी हो । नेपाली कांग्रेसले समावेशीको मुद्दालाई समेट्यो त्यसकारण महासमिति बैठक समाप्त हुनासाथ चारैतिर प्रसंशाको विषय भयो । किनभने कांग्रेसले संविधानको भावनाअनुरूप आठवटा कलस्टर तय ग¥यो । कांग्रेसले संघीयतालाई मानेर आफ्नो मोडालिटी तय ग¥यो । संघीयता र समावेशितामा नेपाली कांग्रेस गइसकेपछि त्यसको आलोचना गर्नु उपयुक्त होइन । कतिपयले समावेशीअनुसार उही पुरानै अनुहार आउँछन् भन्ने गुनासा गर्छन् । तर, अनुहार त नयाँ र पुराना पनि हुन सक्छन् । ती कुरा त मतदाताले तय गर्ने कुरा हो ।
गत वर्षको निर्वाचनमा जसरी नेपाली कांग्रेस कमजोर भएको देखियो यसको विभिन्न पाटाहरू छन् । अहिले यथार्थ र सत्य हामीले मूल्यांकन गर्नुपर्छ । किनभने पहाडको निर्वाचनमा दुईवटा कम्युनिष्ट पार्टी एक ठाउँमा आयो, स्वाभाविकरूपले कांग्रेस कमजोर भयो । यस्तै, तराईका दलहरूसँग पनि निर्वाचनमा चुनावी सहकार्य हुन सकेन, जसले गर्दा कांग्रेसको सिट कम हुन गयो । कहीं न कहीं गुटउपगुटभन्दा पनि अन्तर्घातले पार्टीलाई ठूलो क्षति भयो । तर, निर्वाचनमा कांग्रेसले पराजय बेहोर्नुको मुख्य कारक विभिन्न दलबीच चुनावी मोर्चाबन्दी, पुरानै अनुहारहरूलाई उम्मेदवार बनाइनु र अन्तिम समयमा उम्मेदवार टुंगो लगाउनु नै रह्यो । कांग्रेसको पराजको कारण अन्तर्घात मात्रै होइन यसका विभिन्न पाटाहरू छन् । हामीले मतको संख्या हेर्ने हो भने २०७० को निर्वाचनभन्दा अहिले मत बढी देखिएको छ ।
प्रतिनिधित्वको विषयलाई हेर्ने हो भने समानुपातिकमा पनि राम्रै अवस्था आएको छ । तर, दुईटा पार्टी एक ठाउँमा मिल्दा एक दुई मतले हार÷जीत हुँदा त्यो ठूलो कुरा होइन । तर, संख्याको आधारमा अहिले हामी निश्चितरूपमा कमजोर देखिएका छौं । त्यसैले गर्दा अहिले हामी जुन अवस्थामा आइपुगेका छौं त्यो अन्तद्र्वन्द्वले मात्रै होइन । हामी पनि मधेशका दल वा तत्कालीन माओवादीसँग गठबन्धन बनाएर जानसक्थ्यौं । गठबन्धन बनाएर जान सकेको भए कांग्रेसको अवस्था धेरै राम्रो हुन्थ्यो ।
विधि र विधानबाट आएको सभापतिलाई कसैले हटाउन सक्दैन । मेरो अनुहार, व्यवहार, कार्यशैली कसैलाई मन नपर्ला, तर त्यो अनुसार, व्यवहार र कार्यशैली विधि र विधानबाट आएको हो नि । यदि सभापति देउवालाई हटाउन कसैले चाहन्छ भने त्यसका लागि विधि र विधान चाहियो नि । त्यो विधि भनेको कांग्रेसको महाधिवेशन नै हो । त्यो विधिसम्म त कुर्नैपर्ने हुन्छ नि ।
अर्लि महाधिवेशन हुने सम्भावना नै छैन । कांग्रेसको इतिहासमा अहिलेसम्म यस्तो अवस्था आएको छैन । निर्वाचन आयोगमा नेपाल कांग्रेसले यदि आफ्नो विधानअनुसार पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर पनि महाधिवेशन गर्दैन भने पार्टी नै खारेज हुने अवस्थामा जानसक्छ । त्यसकारण यस्ता कुराहरू जनमत जुटाउनका लागि गरिने प्रपञ्चहरू मात्रै हो । यसले उहाँहरूलाई पनि फाइदा गर्दैन । किनभने जो अहिले अर्लि महाधिवेशनको पक्षमा हुनुहुन्छ, जसले देउवालाई हटाउनुपर्छ भनिरहनुभएको छ, उहाँहरूले हिजो पार्टी सञ्चालनमा पुग्नुभएको थियो । आफूले गर्न नसक्ने अनि आज अलि अधिवेशन चाहियो भनेर हुँदैन । अर्लि अधिवेशनको परिणाम पनि उनकै फेवरमा जान्छ भन्ने पनि छैन नि । केही समस्याहरू छन् भने टेबुल टक गरेर समाधान गर्नुपर्छ । त्यसलाई सभापतिले पनि सरल र सहज तरिकाले स्वीकार्नुपर्छ ।
नेपाली कांग्रेस विभिन्न मुद्दाहरूमा आफ्नो प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेकै छ । मुलुकमा देखिएका हरेक जल्दाबल्दा मुद्दाहरूमा कांग्रेस खरो रूपमा आफ्नो प्रस्तुती दिँदै आएको छ । सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलहरूबाट हुनुपर्छ अन्यथा सदन चल्नै दिन्नौं भन्ने परिस्थिति हामी सिर्जना गर्न सक्थ्यौं । मुलुक अहिले शान्ति प्रक्रियामा गइसकेपछि फेरि द्वन्द्व चर्काउनेतर्फ कांग्रेस लाग्दैन । विभिन्न भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा कांग्रेसले खरो रूपमा आवाज उठाएको छ । कर्मचारीहरूको समस्याका विषयमा पनि कांग्रेसले आवाज उठाएकै छ । त्यसकारणले नेपाली कांग्रेस चुप लागेर बसेको अवस्था छैन । (नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्य मुसलमानसँग गरिएको कुराकानीको आधारमा) (मधेश दर्पण फिचर सेवा)
प्रकाशित मिति : शनिबार, चैत्र २, २०७५ , १२:५६ बजे
दलित महिला जातीय र लैंगिक दुवै खालको हिंसामा परेको गुनासो
विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने जोकसैलाइ कारबाही गरीने–भौतिक पुर्वाधार मन्त्री नेम्वाङ
मानवअधिकार सम्वन्धि प्रयाप्त कानुन कार्यान्वयनको चरणमा : प्रदेश ५ सामाजिक बिकास मन्त्री बराल
पत्रकार केसीलाई औद्योगिक पत्रकारिता पुरस्कार
उद्योगी व्यवसायीले आजसम्म भएका उपलब्धीको बारेमा पनि कुरा उठाउनुपर्छ : मन्त्री गिरी